डा.उपेन्द्र देवकोटालाई लेखेको मर्मस्पर्शी पत्र - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
डा.उपेन्द्र देवकोटालाई लेखेको मर्मस्पर्शी पत्र
Published On : २२ बैशाख २०७५, शनिबार १८:४३
हामी सबै मृत्युको गन्तब्य बोकेर जन्मिएका हुन्छौं । हरेक पलपलमा मृत्युलाई जित्दै, नाघ्दै, अस्वीकार गर्दै, अटेर गर्दै ..हामीहरु उसैको गन्तब्यतिर दौडिरहेका हुन्छौं । जन्मेपछि मान्छेमात्र हैन हरेक प्राणी, बस्तु तथा सृष्टिको अन्त्य हुन्छ । जीवन निमेषमा चलेको हुन्छ भने मृत्यु असिमित आयु र अनन्त दायरामा बाँचेको हुन्छ । हाम्रो त के कुरा ? भगवान राम, कृष्ण, अल्लाह, येशु लगायत देवता समेत मृतुन्जयी बन्न सकेनन । मृत्यु अनपेक्षित, चामत्कारिक एबम सर्वाधिक पीडादायी सत्य हो । दुर्घटनामा परेर, हृदयाघात भएर, मस्तिष्कघात भएर वा अन्य प्राणघातक रोगबाट पनि तपाइंको मृत्यु हुनसक्थ्यो । त्यसो भएको भए तपाइंलाई आफुले मृत्युबरण गर्दै गरेको वा गरेको समेत थाहा हुने थिएन । अहिले कमसेकम आफ्नो आयु थाहा छ, उपचार गर्न नपाएको गुनासो छैन, ब्यबहार मिलाउन नपाएको पारिवारिक पीडा छैन… ठूलो कुरा त चमत्कारको आशा छ । यो संसारमा लाखौं यस्ता रोगहरु छन् जसलाई चिकित्सा बिज्ञानले अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छैन, लाखौँ उपचारका स्रोत छन् जसलाई चिकित्सा विज्ञानले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
तपाईंलाई आफ्नो आयुको २० बर्ष दिन तयार प्रशंसक